Tag: ahia metrics | Martech Zone
Tag: ahia metrics
Otu esi eme ka ikwesi ntukwasi obi nke ndi ahia na ire ahia di iche
Fraịde, Ọktọba 19, 2018 Saturday, October 20, 2018 Nina Ritz
Nweghị ike ijigide ihe ị na-aghọtaghị. Mgbe a na-elekwasị anya na ịchọta ndị ahịa mgbe niile, ọ na-adị mfe iwepụ ya. Ọ dị mma, yabụ na ị chọpụtala usoro nnweta, ị meela ngwaahịa / ọrụ gị ka ọ daba na ndụ ndị ahịa. Ntụle ọnụahịa gị pụrụ iche (UVP) na - arụ ọrụ - ọ na - eme mgbanwe ma na - eduzi mkpebi nzụta. You maara ihe na-eme mgbe ọ gasịrị? Ebee ka onye ọrụ ahụ dabara mgbe emechara usoro ahịa ahụ? Malite site na ingghọta ndị na-ege gị ntị n’agbanyeghi na ọ bụ
Isi ahia ahia 3 kacha elu emeputara ohuru
Tọzdee, Febụwarị 4, 2016 Wednesday, February 3, 2016 Akara Montini
Gini mere i ji malite ahia gi? Aga m nzọ n'ugbo ahụ “n'ihi na achọrọ m ịbụ onye ahịa” abụghị azịza gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị dị ka otu narị narị ndị nwere obere azụmaahịa mụ na ha rụkọtara ọrụ nwere ike ị ghọtara ihe dị ka sekọnd 30 ka ị meghere ọnụ ụzọ gị na ọ bụrụ na ị ghọrọ onye na-azụ ahịa, ị gaghị abụ onye nwe obere azụmaahịa ruo ogologo oge. Ma, ikwu eziokwu, nke ahụ na-ewute gị n'ihi na ị naghị enwe obi ụtọ
Kedu ihe bụ ego mmefu ego kwesịrị ekwesị dị ka pasent nke ego ha na-enweta?
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2015 Sunday, October 18, 2015 Douglas Karr
Enwere oge ndị ahụ na-adịghị mma n'oge ụfọdụ ebe ụlọ ọrụ na-ajụ m ihe kpatara na ha anaghị enweta nlebara anya dị ka ndị asọmpi ha. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume azụmaahịa ịchụ ndị na-asọ mpi n'ihi ngwaahịa ma ọ bụ ndị mmadụ ka elu, o yikarịrị ka ọ bụghị na ụlọ ọrụ nwere nnukwu itinye ego na ahịa na ire ahịa ga-emeri. Ọbụna ngwaahịa dị elu na okwu ọnụ dị egwu enweghị ike imeri ahịa dị egwu. E nwere atọ
Sunday, August 23, 2015 Sunday, October 18, 2015
Top 5 Metrics na Investments Marketers na-eme na 2015
Tuesday, January 27, 2015 Douglas Karr
Maka oge nke abụọ, Salesforce nyochara ndị ahịa 5,000 n'ụwa niile iji ghọta ihe kacha mkpa maka 2015 gafee ọwa dijitalụ niile. Nke a bụ nkọwa nke akụkọ zuru oke nke ị nwere ike ibudata na Salesforce.com. Ọ bụ ezie na nsogbu ịma aka kachasị emetụtakarị bụ mmepe azụmaahịa ọhụụ, ogo ndu, yana ijikọ na teknụzụ, otu ndị ahịa si eji usoro mmefu ego na akara agam n’ihu na-adọrọ mmasị.
Tuesday, January 21, 2014 Douglas Karr
Pardot tinyere mpempe akwụkwọ ahịa aghụghọ nke na-eme njem ahụ. Nchịkọta ahịa taa dị ike. Ndị na-ere ahịa nwere ohere ịnweta ụdị metrik niile, site na echiche peeji na ọnụọgụ nke ndị na-ege ntị na ọnụọgụ ndị na-ekpughe ihe metụtara ndu na ahịa. Site na nghọta na-eto eto na data ịzụ ahịa, ọ dị mfe ịnwe data nke - ọtụtụ oge karịa - anaghị emetụta ego gị. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ilekwasị anya